Tonizia: fifandonana teo amin'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana tao Tataouine - teles relay
Tonizia: Fifandonana eo amin'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana any Tataouine
Nitohy ny fifandonana tamin'ny alatsinainy teo anelanelan'ny fampiharana ny lalàna sy ny mpanao fihetsiketsehana tany Tataouine, tany atsimon'i Tonizia, izay nitaky ireo mpanao fihetsiketsehana nitaky asa an'arivony nampanantenain'ny governemanta tamin'ny taona 2017.
Nipoaka indray ny fifandonana, ny alatsinainy 22 jona, tao an-tanànan'i Tataouine, any atsimon'i Tonizia, teo anelanelan'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana. Takian'izy ireo ny asa sy ny fampiharana ny drafitra fahazoan-dalana nampanantenain'ny mpanatanteraka tamin'ny taona 2017.
"Mampidi-doza ny toe-javatra, avy any amin'ny varavarankelin'ny tranoko no ahitako ny polisy manapoaka baomba mandatsa-dranomaso sy manenjika ny tanora," hoy i Ismail Smida, mponina ao Tataouine, tamin'ny Reuters. Vavolombelona iray hafa koa dia nitatitra ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana an-jatony nitora-bato, manakana ny lalana ary mitaky ny "zon'ny fampandrosoana sy ny asa".
Napetraka teo anoloan'ireo fananganana fanjakana ny tafika, hoy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena.
Antso hanao fitokonana ankapobeny
Fanamelohana ny fampiasana ny hery "tafahoatra sy tsy voamarina" amin'ireo mpanao fihetsiketsehana, ny ivondronan'ny sendika matanjaka UGTT dia niantso fitokonana ankapobeny ny alatsinainy tany Tataouine. Misokatra ny magazay, fa ny serivisy ho an'ny daholobe sy ny andrim-panjakana dia nijanona tsy nikatona, araka ny filazan'ny mpitatitra nataon'ny AFP.
Nandritra ny herinandro maromaro, ny tanora sy ny tsy an'asa avy ao Tataouine, tanàna 500 km miala any Tunis, dia nijery sit-in mba hitaky ny fangatahana ny fifanarahana efa vita sonia tamin'ny taona 2017 miaraka amin'ny governemanta, ary mampanantena asa sy famatsiam-bola any amin'ity faritra marefo ity. Nakaton'izy ireo tampoka ny làlana sasany tao an-tanàna sy ny kamiao avy amin'ny orinasan-tsolika sy gazy manompo ny toerana famokarana El Kamour, izay misy 160 kilometatra miala eo afovoan'ilay efitra.
Raha ny filazan'ny minisiteran'ny angovo, dia tsy nisy fiantraikany tamin'ny famokarana solika sy ny entona tahaka izao ny fisavorovoroana, tsy toy ny 2017, rehefa nosakanan'ny mpanao fihetsiketsehana farany ny valin-dàlana. Avy eo ny governemanta dia nampanantena fa hampiasa dinara 80 tapitrisa dolara (27 tapitrisa eo ho eo) isan-taona ho an'ny fampandrosoana an'i Tataouine, raha tsy misy izany, hoy ny sendikan'ny UGTT. Ary ampahany amin'ireo asa an'arivony nampanantenaina, ao amin'ny orinasan-tsolika na ireo rafitry ny fikojakojana ny tontolo iainana no natsangana.
Tataouine, faritra tena voakasiky ny tsy fisian'ny asa
Folo taona taorian'ny revolisiona, Tataouine, faritra iray any amin'ny farany atsimon'i Tonizia, izay misy ny ankamaroan'ny loharanon'ny hydrocarbon any Tonizia, dia mijanona ho tsy miorina, nanondro ny ONG Oxfam tamin'ny tatitra iray navoaka momba ny tsy fitoviana tamin'ny alatsinainy.
Tamin'ny taona 2019, "mponin'i Tataouine, faritra izay tratry ny tsy fananana asa (28,7%), inefatra heny matetika no tsy manana asa noho ny mponina ao Monastir", faritra mahasoa amin'ny morontsiraka, ary manasongadina an'i Oxfam. Ny serivisy ara-pahasalamam-bahoaka koa dia zara raha zatra, misy fandriana 10,2 isaky ny mponina 10 any Tunis, raha ampitahaina amin'ny 000 any Tataouine.
Nihaona tamin'ny mpikatroka avy any Tataouine ny filoha Kais Saied, ny alatsinainy tamin'ny volana janoary, ary nanasa azy ireo hanolotra hevitra momba ny tetik'asa nefa tsy miandry ny fanjakana.
"Te hanitsakitsaka antsika ny governemanta"
Ny Minisitry ny asa Toniziana, Fethi Belhaj, dia nanome toky tamin'ny resadresaka tamin'ny radio tsy miankina fa neken'ny governemanta ny fanajana ny "fifanarahana rehetra" tamin'ny taona 2017. "Ara-dalàna ny fitakian'ny mpanao fihetsiketsehana (…) raha toa tsy hanelingelina ireo andrim-panjakana, "hoy izy.
"Ny governemanta dia tsy manana eritreritra ny hitana ny fampanantenany, te hanitsakitsaka antsika izy", hoy ny fiampangan'i Khalifa Bouhaouech, mpikambana ao amin'ny fandrindrana ny sit-in El Kamour. "Efa nandefa taratasy (...) izahay tompon'andraikitra amin'ny fanjakana fa tsy mbola nahazo valiny, koa ny vahaolana dia miverina hanao fihetsiketsehana," hoy izy.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.france24.com/fr/20200622-tunisie-nouveaux-heurts-%C3%A0-tataouine-o%C3%B9-les-manifestants-r%C3%A9clament -jobs
Belzika: Brussels: ny boriborintany Louise natao ho an'ny tombotsoan'ny mpandeha bisikileta
Sophie Wessex mahamenatra: Countess voaporofo tamin'ny 'hevitra manala baraka' tamin'ny mpitarika UK